ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စည်တော်ကြီးထားရှိမည့် ညောင်ရမ်းခေတ်ပုံစင်မြင့်ကို ကောင်းမှုတော် ဘုရားရင်ြ?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လှူ ဒါန်းထားပြီး စစ်ကိုင်းမြို့ရာဇမဏိ စူဠာကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီး ရင် ပြင်တော်၌ထားရှိမည့် ကမ္ဘာ့အကြီး ဆုံး မြန်မာ့ရိုးရာ စည်တော်ကြီး ထားရှိရန် ညောင်ရမ်းခေတ်ပုံစံစင် မြင့်ကို ရင်ပြင်တော်အင်္ဂါထောင့် (အရှေ့တောင်ထောင့်)၌ စတင် ဆောက်လုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
စည်တော်ကြီးထားရှိမည့် စင် မြင့်ပုံစံကို သီတဂူဆရာတော်ကြီး ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မြန်မာမှုဗိသု ကာပညာရှင် တမ္ပဝတီဦးဝင်းမောင် က ညောင်ရမ်းခေတ်ပုံစံရေးဆွဲ ထားကာ တပေါင်းလပြည့်နေ့တွင် စည်တော်ကြီးအား ပင့်ဆောင်ပူဇော် ခံထားရှိရန် စီစဉ်ထားသည်။ စည်တော်ကြီး၏ စင်မြင့်မှာ အောက်ခြေအကျယ် ၂၁ ပေ ခြောက်လက်မ အမြင့် ၁၈ပေရှိပြီး ယင်းအပေါ်မှ အမြင့် ၁၄ ပေ တိုင် ခံ၍ အပေါ်ဆုံး၌ စည်တော်ကြီး ထားရှိမည့် စင်အဆောက်အအုံ အား အမြင့် ၁၂ပေရှိ တိုင်ပေါ်တွင် ညောင်ရမ်းခေတ်ပုံစံ ဘုံအဆင့် ငါး ဆင့်အားအမြင့် ၂၇ပေ ၁၁ လက်မ အမိုးပါပုံစံ တည်ဆောက်မည်ဖြစ် သည်။
အဆိုပါစည်တော်ကြီးကို အင်း တော်မြို့နယ် လက်ပံကုန်းကျေးရွာ မှ ဆရာပွဲမြန်မာ့တူရိယာလုပ်ငန်း မှ ဦးကျော်ညွန့်နှင့်သားများက မျက်နှာတစ်ဖက်လျှင် ၅၄ လက်မ စီ၊ အလျားအရှည် ၁၀ပေ ရှစ် လက်မ၊ လုံးပတ် ၁၇ပေ ရှစ်လက်မ အရွယ်ထု လုပ်ထားပြီး စည်တော် ကြီး၏အတွင်းဘက်၌ ဘုရားဟော ဒေသနာတော်များနှင့် အပြင်ဘက် ၌ စက်တော် ၁၀၈ ကွက် စက် လက္ခဏာများ ပါရှိသည်။
ထုလုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်သည့် စည်တော်ကြီးအား အလှူရှင်မိသား စုက သင့်တော်သည့်နေရာတွင် ထားရှိနိုင်ရန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းထားရာ တိုင်းဒေသ ကြီး ဝန်ကြီးချုပ်မှ သီတဂူဆရာ တော်ကြီးထံ လျှောက်ထားလမ်း ညွှန်မှုခံယူ၍ ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးရင်ပြင်တော်ပေါ်၌ ထားရှိ ရန်နေရာသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မြစ်ကြီးနားမြို့၌ အမှုကြီး ၂၈ မှုသာဖြစ်ပွားခဲ့၊ ယခင်နှစ်ကထက် မှုခင်းဖြစ်ပွ??
မလေးရှားနှင့် ထိုင်းတို့မှ ကွမ်းသီးများကို မြဝတီ-ရန်ကုန်လမ်းမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် တ??